Happy birthday wishes for father in nepali language – get your ex love
तपाईं सबैको चाहना छ कि हामी सँगसँगै धेरै समय बिताउन चाहन्छु, कि म तपाईंसँग बढी समय बिताउन सक्छु र तपाईं आफ्नो मुस्कान मुस्कान मुस्कान गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंको दिनको आनन्द लिनुहोस्!
पिताजी, जन्मदिन मुबारक! तपाईं सधैं अद्भुत पिता हुनुहुन्थ्यो। अब, म भन्न खुसी छु, तपाईं अझ अचम्मको मित्र हुनुहुन्छ।
तपाईं जन्मदिन मुबारक हो, पिता, मलाई थाहा छ कि म तिमीलाई माया गर्छु र म जान्दिनँ कि जहाँ म त्यहाँ हुँ भने यदि तपाईं त्यहाँ मेरो माध्यममा मलाई मार्गदर्शन गर्न त्यहाँ हुनुहुन्छ भने।
यू थिए जो मेरो पक्षमा भए तापनि तपाईं जान्नुभयो कि म गलत थियो र मलाई बताउछु कि म कति जन्मदिनको सराहना गर्छु!
तपाईंले मलाई सहयोग गर्ने मलाई मद्दत गर्नुभयो! जन्मदिन मुबारक, पिता!
कुनै पनि व्यक्ति बुबा हुन सक्छ। पितालाई हुन एक विशेष मानिस लिन्छ!
विश्वको सर्वोत्तम पिताको जन्मदिन मुबारक!
हरेक भयानक पिताले अचम्मको जन्मदिनको र योग्यता पाउनु पर्छ! जन्मदिनको शुभकामना बुबा
बढ्दै गयो, मैले सधैँ तपाईंको पुरस्कार प्रशंसा गरेँ। आज, म भन्न चाहन्छु कि तपाई सबै यू को लागि विश्व पुरस्कार मा सर्वश्रेष्ठ पिता को योग्य हुनुहुन्छ। जन्मदिन मुबारक हो, पिताजी। तपाईं सबैभन्दा योग्य हुनुहुन्छ!
विजेता लक्ष्य छुटे पछि मैले अभ्यासको लागि बाहिर निकालेको बेला मलाई मद्दत गर्न, तपाईंले मलाई कहिल्यै पनि त्याग्न सिकाउनु भएको छ। म जीवनमा मेरो सफलतालाई यू को लाग्दछु, र तपाईंको जन्मदिनको लागि तपाईलाई बाहिर लैजान सक्दैन। शुभकामना
मलाई थाहा छ कि म सधैँ उत्तम बच्चा थिएन, तर यू सधैं सहि बुबा हुनुहुन्थ्यो। थोरै चीजहरू फिक्स गर्नका लागि धन्यबाद मैले भोगें र मलाई देखाउनको लागि मैले मेरो गल्तीहरू कसरी सुधार गर्न सकें। आज तपाईंको जन्मदिनको आनन्द लिनुहोस्। म तिमीलाई माया गर्छु!
म सँधै यू जस्तो बन्न चाहान्छु, र मैले अझै मेरो मन परिवर्तन गरेको छैन। तपाईं बल र प्रेमको मेरो सिद्ध उदाहरण हुनुहुन्छ, र म मेरो सँगी बच्चाहरूलाई एउटै प्रकारका पिता बन्छ जुन तपाईं सधैं मेरो लागि हुनुहुन्थ्यो। जन्मदिनको शुभकामना!
संसारमा सर्वोत्तम पिताको लागि त्यहाँ त्यहाँको लागि धन्यवाद। मलाई अझ राम्रो लाग्न र कडा संघर्ष गर्न आग्रह गर। म सक्नुहुन्न कि म तपाईंको दयालु शब्दहरू र बुद्धिमानी निर्देशन बिना को हुँ। जन्मदिन मुबारक हो, पिता!
जन्मदिनको शुभकामना, जसले मलाई थाहा छ सबै कुरा सिकाउनुभयो। म तपाईंको बुद्धिमा साझेदारी गर्न धेरै सम्मानित छु। म तिमीलाई माया गर्छु!
तिनीहरू भन्छन् कि हामी हामीलाई भन्दा प्रेम गर्नेहरूलाई सिक्न सक्छौं। म तिमीलाई मायालु भएकोमा धन्यबाद हुँ, किनकि यूएले मलाई आजको व्यक्ति बन्न मदत गरेको छ। जन्मदिन मुबारक हो, पिताजी।
पिताजी … सम्झौताको मेरो जीवनको खजाना ट्रिभमा, हामीले सँगै साझेदारी गरेका व्यक्तिहरू हौं जसले मलाई सबैलाई सम्झछ। जन्मदिनको शुभकामना बुबा।
पिताजी … एक रूखको छाया जस्तै, तपाईं मेरो जीवनको क्यान्सर हुनुहुन्छ। जन्मदिनको शुभकामना
आजको लागि सही समय हो आजको लागी, तपाईंलाई सधैँ मलाई बाटो देखाउनको लागी म कति हुँ धन्य। जन्मदिनको शुभकामना बुबा।
मैले मात्र मेरो बुबाको नामलाई बुझाएपछि मानिसहरूले जीनहरू पत्ता लगाउँछन्। जन्मदिनको शुभकामना पिता
प्रिय पिताजी, तपाईंको जन्मदिनमा, म यू जान चाहन्छु कि तपाई साँच्चै एक प्रेरणा, एक मित्र र हामी सबैलाई शिक्षक हुनुहुन्छ।
तपाईंको सम्पूर्ण जीवन, तपाईंले हाम्रो इच्छाहरू सच्याउनको लागि काम गर्नुभयो। आज हामी प्रार्थना गर्छौं कि तपाईंका सबै इच्छाहरू सत्य हो!
सारा ग्रहमा सबै भन्दा धेरै हेरचाह र मायालु पिता हो। मलाई केहि स्नेह र धेरै धेरै स्नान गरौं …
तपाईं सधैं मेरो प्रेरणा र प्रोत्साहन गरिरहनुभएको छ, म आज हुँ, किनकी तपाईं आजको हुँ, जन्मदिनको जन्म पिता, अधिक र धेरै वर्ष धेरै छोरीहरु बाट यू. जन्मदिन मुबारक पिताको लागि मेरो इच्छाहरु हुन्।
मेरो लागि मेरी इच्छा प्रिय पिताजी हो कि हामी समृद्ध जीवन, राम्रो स्वास्थ्य र खुशी मा जन्मदिन को पिता को जन्म मा धेरै वर्ष बिताते हो, म यू.एस.
मेरो बुबा, मेरो दिदी, मेरो बुबा, मेरो प्रोत्साहन, मेरो बुबा, मेरो सबै कुरा, जन्मदिन मुबारक बहुमूल्य पिता।
यू मलाई रक्षा र मेरो द्वारा खडा भयो, तपाईले मेरो गलत गल्ती गर्नुभयो र मलाई मार्फत राख्नुभयो, म धेरै मायालु प्रिय प्रिय पिता हुँ र म तपाईलाई शुभ जन्मदिनको शुभकामना दिन यो माध्यम प्रयोग गर्दछु।
म भाग्यशाली छु कि मलाई संसारमा सबैभन्दा उत्तम बुबा दिइयो, एक बुबा जसले मलाई साँचो हृदयको साथ मलाई प्रेम गर्दछ। तपाईं जन्मदिनको शुभकामना दिनुहुन्छ, पिता!
प्रेम र हँसिलो तपाईले मलाई दिनुभएको छ सबै भन्दा राम्रो चीजहरू हो, पिता! धन्यवाद, पिता!
शुभ जन्मदिन पापा। संसारको सबैभन्दा अचम्मको पिताको लागि मायालु इच्छाहरु! उत्कृष्ट रहनुहोस्!
प्रिय बुबा, हामी जीवनमा निर्णय गर्ने निर्णयको मार्गमा बिना हाम्रो लागि सदैवको लागि धन्यवाद। मई यू धेरै जन्मदिनहरू जन्मदिन, जन्मदिनको जन्मदिन!
म जन्मेको हुँदा, तपाई सोच्नुभयो कि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्थ्यो। बाहिर जान्छ, म तिमीलाई मायालु हुनुहुन्थ्यो पितालाई! शुभकामना पापा।
यदि तपाईंले मलाई जीवनमा केहि सिकाउनुभएको छ भने, यो कहिल्यै हार छैन! मलाई कहिल्यै नदिई धन्यवाद!
मलाई भाग्यशाली रूपमा लाग्न सक्छु, किनकि संसारको सबैभन्दा राम्रो बुबा मेरो हो! शुभकामना बेपत्ता
यो एक राम्रो कुरा हो कि यू प्रत्येक उत्कृष्ट उपलब्धि को लागी एक ट्राफी छैन किनभने तपाईं ठाउँ बाट बाहिर हुनुहुनेछ! जन्मदिनको शुभकामना!
यहाँ यहाँ एक रमाइलो तथ्य होईन – होइन, तपाईं पुरानो हुदै हुनुहुन्न। बस कि तपाईं पनि मजाकिया हेर्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ धेरै खराब मजाकहरू र यू, पिताजीको लागि जन्मदिनको शुभकामना छ!
मेरा प्रिय पिताजी, मलाई आज तपाईको जन्मदिन हो, तर यो एक छुट्टै छुट्टी छैन त्यसैले यसको बारेमा उत्साहित छैन। ठट्टा गरेको। यो महत्त्वपूर्ण दिनको जन्मदिन धेरै महत्त्वपूर्ण मानिसलाई जन्मदिन!
म कलका लागि सोचिरहेको छु कि यू.ए. को लागि एक मजेदार जन्मदिनको सन्देशमा लेख्न को लागी। । तर म केहि मजाकिया जस्तो लाग्यो। मेरो बुबाको जन्मदिन मुबारक हो।
तपाईंको 18 औं जन्मदिनको 38 औं वर्षको बधाई छ! तिमी अझै पनि जवान हो, पिताजी। 60 वर्षको जन्मदिनको बुबा
तपाईले संसारलाई मेरो मतलब छ। तपाईंको जन्मदिनमा, म तिमीलाई खुशीको संसार, आशा र जीवनको आशीर्वाद भरिएको छु।
विगत भविष्यको लागि एक सडक नक्सा हो। तपाईंले यति धेरै समयमा यति धेरै हासिल गर्नुभएको छ; म भविष्यको लागि तपाईंको प्रतिज्ञा पूरा गर्दछु। एक अद्भुत जन्मदिन छ!
आज तपाईंलाई धेरै खुसी इच्छाहरु पठाउँदै। तपाईं विकास, समृद्धि, शान्ति र ठूलो आनन्दको अर्को वर्षलाई शुभकामना दिनुहुन्छ। मेरो बुबाको जन्मदिन शुभकामना।
जन्मदिन शुभकामना, मेरो साथी। मलाई आशा छ कि गत वर्षले तपाईंको शान्ति, आनन्द र सान्त्वना ल्याएको छ, र म आउँदो वर्ष तिम्रो लागि प्रार्थना गर्दैछु। मेरो बुबाको जन्मदिन मुबारक हो।
प्रिय पिता, मलाई आशा छ कि तपाईं मलाई वास्तवमा मेरो मतलब के हो भनेर थाहा छ। सबैको लागि धन्यवाद, शुभ जन्मदिन!
जन्मदिनको जन्मदिन बुबा। पिताजी, तपाईंले यी सबै दिशानिर्देश र समर्थनको लागि धन्यवाद दिनुभएको छ जुन तपाईंले यी सबै वर्षहरुमा मलाई दिनुभएको छ। तपाईंले लाइभ गर्नको लागि तपाईंले निश्चित रूपमा जीवनलाई धेरै सजिलो बनाउनुभएको छ।
म बढ्दै गएको थिएँ, म आफैलाई सधैं तपाईंलाई देख्छु, सधैं तपाईंलाई प्रशंसा गर्छु, तपाईलाई सधैं मेरो भूमिका मोडेलको रुपमा। र म आज हुँदो व्यक्तिको न्याय, तपाईं एक महान भूमिका मोडेल पिता हुनुहुन्थ्यो! जन्मदिनको शुभकामना! सबैको लागि धन्यवाद, म तिमीलाई माया गर्छु।
पिताजी, हे सधैं मेरो लागि त्यहाँ छ। जब तपाईं मेरो हेरचाह गर्न घर थिएन भने, यो तपाईं किनभने बाहिर थिए, काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईं मलाई उठाउन आवश्यक रकम प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं सर्वश्रेष्ठ पिता हुनुहुन्छ म आशा गर्न सक्दिन। जन्मदिनको शुभकामना म तिमीलाई माया गर्छु।
बारबेक्यूबाट, मत्स्य पालन गर्न, खेलकुद, कम्प्युटरहरूमा। त्यहाँ साँच्चिकै केहि होइन जुन तपाईले गर्न सक्नुहुन्न! तपाईं एक सुपर पिता जस्तो हुनुहुन्छ! र यसकारण म तपाईंलाई प्रशंसा गर्छु! जन्मदिनको शुभकामना!
कुनै पनि कुरा हो कि तपाइँ युवतीको आयु कतिपय साथी बन्न सक्नुहुनेछ, सबै पछि, के म आइतवार राति खेल खेल्न चाहन्छु भने यो मेरो प्रिय पिता संग छैन? जन्मदिनको शुभकामना!
व्यक्तिगत रूपमा, म एक वर्षमा दुई पटक बुबाको दिन मनाउन चाहन्छु – एक प
टक बुबाको दिनमा र एक पटक मेरो बुबाको दिन, तपाईंको जन्मदिनमा। और, पिताजी, तपाईं यसलाई सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम पिताको लागि योग्य हुनुहुन्छ। जन्मदिन मुबारक हो, पिताजी ..
अर्को वर्ष चलेको छ र हरेक बर्षमा मैले पास पारिएको छु जुन भाग्यशाली म तपाईंको जीवनमा छु। त्यहाँ मेरो लागि पिताको लागि धन्यवाद यू। शुभ बी दिन बुबा।
व्यक्तिगत रूपमा, म एक वर्षमा दुई पटक बुबाको दिन मनाउन चाहन्छु – एक पटक बुबाको दिनमा र एक पटक मेरो बुबाको दिन, तपाईंको जन्मदिनमा। और, पिताजी, तपाईं यसलाई सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम पिताको लागि योग्य हुनुहुन्छ। जन्मदिन मुबारक हो, पिताजी ..
संसारमा सबैभन्दा ठूलो पिता हो। यदि यो बुबाको दिन थियो भने, म तिमीलाई एक टाई दिनेछु। तर यो तपाईंको जन्मदिन हो, त्यसैले म तिमीलाई मेरो सबै माया, सम्मान र स्नेह, बाँड्ने सम्बन्ध दिनेछु। जन्मदिनको शुभकामना!
अर्को वर्ष चलेको छ र हरेक बर्षमा मैले पास पारिएको छु जुन भाग्यशाली म तपाईंको जीवनमा छु। त्यहाँ मेरो लागि पिताको लागि धन्यवाद यू।
पिताजीलाई जन्मदिनको शुभकामना। मई यू लामो जीवन र समृद्धि छ।
जन्मदिन मुबारक प्रिय पिता, एक अद्भुत व्यक्ति, मेरा बहुमूल्य पिता र सुपर हीरो, तपाईं धेरै वर्षहरु लाई समृद्धि र राम्रो स्वास्थ्यमा रहन सक्नुहुनेछ हाम्रो साथ धेरै सुन्दर क्षणहरू छन्। म यू यू लाई माया गर्छु।
पिताजी, म तिमीलाई अद्भुत, सुन्दर र सुन्दर जन्मदिनको उत्सव चाहन्छु किनभने यो तपाईं के योग्य हुनुहुन्छ, लामो जीवन, धन, स्वास्थ्य र पूर्तिको नयाँ उमेरमा स्वागत छ।